ကွန်ဒိုတိုက်ခန်း ဝယ်တဲ့အခါ သတင်းစာကြော်ငြာဖို့မမေ့သင့်ပါ - Property Knowledge in Myanmar | iMyanmarHouse.com
29 Nov 2019 3:26 pm တွင် တင်ခဲ့သည်
3787 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ ပြီး
မှတ်မိနေပါသေးတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ (၃)လလောက်ကပေါ့။ ရန်ကုန်မြို့တွင်းက ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းကိုမှ ဝယ်ချင်ပါတယ်လို့ ဆိုလာသူ “ ကိုကောင်းစံ ” ရဲ့ ဆန္ဒကိုပါရမီဖြည့်ဖို့ အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်ကို ညီဇော်တို့ဇနီးမောင်နှံက အကျိုးဆောင်ချင်း ချိတ်ဆက်ပြီး ကြိုးစားရှာဖွေပေးကြပါတယ်။ ဒါနဲ့ ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်က ကွန်ဒိုပိုင်ရှင်တစ်ဦးနဲ့ ချိတ်ဆက်မိလို့ အိမ်ရာတစ်ခုကိုရောက်ခဲပါတယ်။
အပြီးလက်ငင်းပေးချေဖို့ တောင်းဆိုတဲ့ ရောင်းသူ
ရောင်းမယ့် ကွန်ဒိုနှစ်ခန်းက ဘယ်ခန်း၊ ညာခန်း နှစ်ခန်းတွဲဖြစ်လို့ ကိုကောင်းစံက ပိုပြီးသဘောကျတယ်။ သိန်းတစ်ရာလောက်ပဲ စရန်ပေးပါရစေလို့ ပြောတော့ရောင်းသူက စရန်မလိုပါဘူး။ တစ်ခါတည်း အပြီးငွေချေတာ အကြိုက်ဆုံးပါ လို့ ပြောပါတယ်။ ဒါဆိုရင် (၁၀)ရက်လောက်တော့ ခေတ္တစောင့်ပါ။ သတင်းစာမှာ ကန့်ကွက်မယ်သူ ရှိမရှိ ကြော်ငြာကြည့်ချင်လို့ပါ။ တောင်ဆိုတဲ့အခါ ရောင်းသူကလည်း ခဏဆိုတော့ ခွင့်ပြုပါတယ်။
ဒါနဲ့ ဝမ်းသာအားရ သတင်းစာမှာ ကြော်ငြာကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ မထင်မှတ်ဘဲ ကန်ကွက်ချက်တွေ ပေါ်လာပါတော့တယ်။ တစ်ယောက်သောသူက A , B အခန်း (၂) ခန်း ရှိတဲ့အနက် A အခန်းကို သူတို့ဝယ်ထားတာတဲ့။ ပထမအရစ် တိုက်ခန်းတန်ဖိုးရဲ့ တစ်ဝက်ကိုပေးထားတဲ့ “ နှစ်ဦးသဘောတူ တိုက်ခန်းအရောင်းအဝယ် ကတိစာချုပ် (မူရင်း) ” ကို ထုတ်ပြပါတယ်။ သူထုတ်ပြတဲ့ စာချုပ်ကြည့်လိုက်တော့ အမှန်တကယ် ချုပ်ဆိုထားတဲ့ စာချုပ် ဖြစ်နေတယ်။ ဒါဆို ဒုတိယအရစ်ကျန်ငွေ မပေးဘဲ ဘာဖြစ်လို့ လက်ရောက် မယူခဲ့တာလဲလို့ မေးကြည့်တော့ ကျန်းမာရေးမကောင်းလို့ စင်ကာပူမှာ ဆေးကုသွားနေတာ (၃)လကြာသွားပါတယ်။ ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ (၃)လအထိ မစောင့်နိုင်လို့ အခု ကိုကောင်းစံတို့ကို ရောင်းမယ့်သူက ဝယ်သွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲဒါ မူလပိုင်ရှင် ကန်ထရိုက်တာနဲ့ အဆက်ဆက် ဝယ်ထားသူတွေကို တိုင်းတရားရုံးမှာ တရားစွဲထားတယ်လို့ ပြောပြီး တရားမကြီးအမှုတွဲကို ထုတ်ပြပါတယ်။
ဟင် ဒါဆို အခုဝယ်မယ့် ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မဟုတ်ဘဲ ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ စောစောစီးစီး နောက်ဆုတ်တာက အကောင်းဆုံးလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကန့်ကွက်ရက်က (၇)ရက် အပြည့်ပေးလို့နောက်တစ်နေ့မှာ စာပို့လုလင်တစ်ယောက်က နို့တစ်စာတစ်စောင်လာပို့ပြန်ပါတယ်။
ဝယ်သူထံက နို့တစ်စာ လာပြန်တာလဲလို့ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ စာအိတ်ကို ဖောက်ဖက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ သတင်းစာက ကန့်ကွက်ရန်ရှိမရှိ ကြော်ငြာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရှေ့နေကြီးတစ်ဦးရဲ့ အသိပေး အကြောင်းကြားစာ ဖြစ်နေပါတယ်။
နောက်တစ်ခါ လာပြန်ပြီ ရှေ့နေကြီးရဲ့ နို့တစ်စာ
သူရဲ့ အမှုသည်ကလည်း ကိုကောင်းစံကြော်ငြာတဲ့ တိုက်ခန်း(၂)ခန်းလုံးကို ဝယ်ထားတဲ့သူ ဖြစ်နေပြန်ပါတယ်။ သူက တော့ အခြားကန်ထရိုိက်တာတစ်ဦးထံက ဝယ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဒီကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွေက ကန်ထရိုက်တာတစ်ဦးလည်း မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သိလာရပြန်ပါတယ်။ ရှေ့နေကြီးက အသ်ိပေးတဲ့အချက်ကတော့ ဒီတိုက်ခန်း (၂)ခန်း နဲ့ ပတ်သက်လို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်ရုံးမှာ တရားမကြီးအမှုအမှတ် ( ) နဲ့ တရားစွဲပြီး သူပိုင်ငါပိုင်အငြင်းပွားနေတဲ့ တိုက်ခန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိနစ်နာသူက ကန်ထရိုက်တာများ အပါအဝင် စာချုပ်အဆင့်ဆင့်ဖြင့် ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်ထားသူ (၉)ဦးခန့်ကို တရားပြိုင်ထားပြီး တရားစွဲဆိုထားတာလို့ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရှေ့နေကြီးက အမှုတန်းလန်းကြီးနဲ့ အဲဒီတိုက်ခန်းကို ဝယ်ခဲ့ရင် လူကြီးမင်းကိုလည်းတရားပြိုင် (၁၀)ယောက်နဲ့ နောက်တိုး တရားပြိုင်အဖြစ် တရားစွဲဆိုခြင်း ခံရပါလိမ့်မယ်လို့ မေတ္တာနဲ့ အသိပေးထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ဟိုက်…. တော်ပါသေးရဲ့။ နို့တစ်စာနဲ့ အသိပေးတဲ့ ရှေ့နေကြီးကို အထူးကျေးဇူးတင်နေမိပါတယ်။ ဒါဟာ ကန့်ကွက်ရန် ရှိမရှိ သတင်းစာမှာ ကြော်ငြာမိလို့သာပေါ့။ နို့မဟုတ်ရင် အမှုတွဲမှာ ပါသွားပြီး တရားပြိုင်(၁၀)နဲ့ အမှုရင်ဆိုင်ရတော့မှာ ။ ဒါကြောင့် ပြောတာပေါ့ အိမ်ခြံမြေတိုက်ခန်းတွေဝယ်ကြရင် ကန့်ကွက်ရန်ရှိမရှိ သတင်းစာကြော်ငြာသင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ရှေ့နေငှါးရမ်းခ ဈေးကြီးတယ်ဆိုရင်လည်း မိမိအစီအစဉ်နဲ့ အခြားရှေ့နေတွေ ကြော်ငြာထားတဲ့ နမူနာယူပြီး မိမိနာမည်နဲ့ ကြော်ငြာရင်း သတင်းစာကြော်ငြာခပဲ ကုန်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ အိမ်ခြံမြေတိုက်ခန်း ဝယ်ယူသူတိုင်း ကြော်ငြာကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
အိမ်ခြံမြေတိုက်ခန်း အရောင်းအဝယ်ကိစ္စဆိုတာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်လို့ သတင်းစာမှာ ကြော်ငြာရင် ၁ လက်မ(တစ်ကော်လံ)ကို ငွေကျပ် ၁၂၀၀၀ (ကျပ် တစ်သောင်းနှစ်ထောင်)ပဲ ပေးရတယ်။ ဒါကြောင့် တန်ဖိုးကြီးတဲ့ မြေနဲ့ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွေ ဝယ်ရင် ကြေးမုံ ၊ မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာမှာ ကြော်ငြာဖို့ မမေ့ပါနဲ့လိုက အသိပေးတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
သုခီ အတ္တာနံ ပရိဟရန္တု
မှတျမိနပေါသေးတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ (၃)လလောကျကပေါ့။ ရနျကုနျမွို့တှငျးက ကှနျဒိုတိုကျခနျးကိုမှ ဝယျခငျြပါတယျလို့ ဆိုလာသူ “ ကိုကောငျးစံ ” ရဲ့ ဆန်ဒကိုပါရမီဖွညျ့ဖို့ အိမျခွံမွအေကြိုးဆောငျကို ညီဇျောတို့ဇနီးမောငျနှံက အကြိုးဆောငျခငျြး ခြိတျဆကျပွီး ကွိုးစားရှာဖှပေေးကွပါတယျ။ ဒါနဲ့ ပနျးဘဲတနျးမွို့နယျက ကှနျဒိုပိုငျရှငျတဈဦးနဲ့ ခြိတျဆကျမိလို့ အိမျရာတဈခုကိုရောကျခဲပါတယျ။
အပွီးလကျငငျးပေးခဖြေို့ တောငျးဆိုတဲ့ ရောငျးသူ
ရောငျးမယျ့ ကှနျဒိုနှဈခနျးက ဘယျခနျး၊ ညာခနျး နှဈခနျးတှဲဖွဈလို့ ကိုကောငျးစံက ပိုပွီးသဘောကတြယျ။ သိနျးတဈရာလောကျပဲ စရနျပေးပါရစလေို့ ပွောတော့ရောငျးသူက စရနျမလိုပါဘူး။ တဈခါတညျး အပွီးငှခေတြော အကွိုကျဆုံးပါ လို့ ပွောပါတယျ။ ဒါဆိုရငျ (၁၀)ရကျလောကျတော့ ခတ်ေတစောငျ့ပါ။ သတငျးစာမှာ ကနျ့ကှကျမယျသူ ရှိမရှိ ကွျောငွာကွညျ့ခငျြလို့ပါ။ တောငျဆိုတဲ့အခါ ရောငျးသူကလညျး ခဏဆိုတော့ ခှငျ့ပွုပါတယျ။
ဒါနဲ့ ဝမျးသာအားရ သတငျးစာမှာ ကွျောငွာကွညျ့တဲ့အခါမှာတော့ မထငျမှတျဘဲ ကနျကှကျခကျြတှေ ပျေါလာပါတော့တယျ။ တဈယောကျသောသူက A , B အခနျး (၂) ခနျး ရှိတဲ့အနကျ A အခနျးကို သူတို့ဝယျထားတာတဲ့။ ပထမအရဈ တိုကျခနျးတနျဖိုးရဲ့ တဈဝကျကိုပေးထားတဲ့ “ နှဈဦးသဘောတူ တိုကျခနျးအရောငျးအဝယျ ကတိစာခြုပျ (မူရငျး) ” ကို ထုတျပွပါတယျ။ သူထုတျပွတဲ့ စာခြုပျကွညျ့လိုကျတော့ အမှနျတကယျ ခြုပျဆိုထားတဲ့ စာခြုပျ ဖွဈနတေယျ။ ဒါဆို ဒုတိယအရဈကနျြငှေ မပေးဘဲ ဘာဖွဈလို့ လကျရောကျ မယူခဲ့တာလဲလို့ မေးကွညျ့တော့ ကနျြးမာရေးမကောငျးလို့ စငျကာပူမှာ ဆေးကုသှားနတော (၃)လကွာသှားပါတယျ။ ပွနျလာတဲ့အခါကတြော့ (၃)လအထိ မစောငျ့နိုငျလို့ အခု ကိုကောငျးစံတို့ကို ရောငျးမယျ့သူက ဝယျသှားတယျလို့ သိရပါတယျ။ အဲဒါ မူလပိုငျရှငျ ကနျထရိုကျတာနဲ့ အဆကျဆကျ ဝယျထားသူတှကေို တိုငျးတရားရုံးမှာ တရားစှဲထားတယျလို့ ပွောပွီး တရားမကွီးအမှုတှဲကို ထုတျပွပါတယျ။
ဟငျ ဒါဆို အခုဝယျမယျ့ ကှနျဒိုတိုကျခနျးက ရှငျးရှငျးလငျးလငျး မဟုတျဘဲ ဖွဈနတောကို တှရေ့ပါတယျ။ စောစောစီးစီး နောကျဆုတျတာက အကောငျးဆုံးလို့ ဆုံးဖွတျလိုကျရတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကနျ့ကှကျရကျက (၇)ရကျ အပွညျ့ပေးလို့နောကျတဈနမှေ့ာ စာပို့လုလငျတဈယောကျက နို့တဈစာတဈစောငျလာပို့ပွနျပါတယျ။
ဝယျသူထံက နို့တဈစာ လာပွနျတာလဲလို့ဆိုတဲ့ အတှေးနဲ့ စာအိတျကို ဖောကျဖကျကွညျ့လိုကျတဲ့အခါ သတငျးစာက ကနျ့ကှကျရနျရှိမရှိ ကွျောငွာနဲ့ ပတျသကျပွီး ရှနေ့ကွေီးတဈဦးရဲ့ အသိပေး အကွောငျးကွားစာ ဖွဈနပေါတယျ။
နောကျတဈခါ လာပွနျပွီ ရှနေ့ကွေီးရဲ့ နို့တဈစာ
သူရဲ့ အမှုသညျကလညျး ကိုကောငျးစံကွျောငွာတဲ့ တိုကျခနျး(၂)ခနျးလုံးကို ဝယျထားတဲ့သူ ဖွဈနပွေနျပါတယျ။ သူက တော့ အခွားကနျထရိုကျတာတဈဦးထံက ဝယျထားတယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒါဆိုရငျ ဒီကှနျဒိုတိုကျခနျးတှကေ ကနျထရိုကျတာတဈဦးလညျး မဟုတျဘူးဆိုတာ သိလာရပွနျပါတယျ။ ရှနေ့ကွေီးက အသိပေးတဲ့အခကျြကတော့ ဒီတိုကျခနျး (၂)ခနျး နဲ့ ပတျသကျလို့ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးတရားလှတျတျောရုံးမှာ တရားမကွီးအမှုအမှတျ ( ) နဲ့ တရားစှဲပွီး သူပိုငျငါပိုငျအငွငျးပှားနတေဲ့ တိုကျခနျးတှေ ဖွဈပါတယျ။ လကျရှိနဈနာသူက ကနျထရိုကျတာမြား အပါအဝငျ စာခြုပျအဆငျ့ဆငျ့ဖွငျ့ ဝယျယူပိုငျဆိုငျထားသူ (၉)ဦးခနျ့ကို တရားပွိုငျထားပွီး တရားစှဲဆိုထားတာလို့ဆိုပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ရှနေ့ကွေီးက အမှုတနျးလနျးကွီးနဲ့ အဲဒီတိုကျခနျးကို ဝယျခဲ့ရငျ လူကွီးမငျးကိုလညျးတရားပွိုငျ (၁၀)ယောကျနဲ့ နောကျတိုး တရားပွိုငျအဖွဈ တရားစှဲဆိုခွငျး ခံရပါလိမျ့မယျလို့ မတ်ေတာနဲ့ အသိပေးထားတာကို တှရေ့ပါတယျ။
ဟိုကျ…. တျောပါသေးရဲ့။ နို့တဈစာနဲ့ အသိပေးတဲ့ ရှနေ့ကွေီးကို အထူးကြေးဇူးတငျနမေိပါတယျ။ ဒါဟာ ကနျ့ကှကျရနျ ရှိမရှိ သတငျးစာမှာ ကွျောငွာမိလို့သာပေါ့။ နို့မဟုတျရငျ အမှုတှဲမှာ ပါသှားပွီး တရားပွိုငျ(၁၀)နဲ့ အမှုရငျဆိုငျရတော့မှာ ။ ဒါကွောငျ့ ပွောတာပေါ့ အိမျခွံမွတေိုကျခနျးတှဝေယျကွရငျ ကနျ့ကှကျရနျရှိမရှိ သတငျးစာကွျောငွာသငျ့ပါတယျ။ တကယျလို့ ရှနေ့ငှေါးရမျးခ ဈေးကွီးတယျဆိုရငျလညျး မိမိအစီအစဉျနဲ့ အခွားရှနေ့တှေေ ကွျောငွာထားတဲ့ နမူနာယူပွီး မိမိနာမညျနဲ့ ကွျောငွာရငျး သတငျးစာကွျောငွာခပဲ ကုနျပါတယျ။ ဒါဆိုရငျတော့ အိမျခွံမွတေိုကျခနျး ဝယျယူသူတိုငျး ကွျောငွာကွလိမျ့မယျ ထငျပါတယျ။
အိမျခွံမွတေိုကျခနျး အရောငျးအဝယျကိစ်စဆိုတာ စီးပှားရေးလုပျငနျးဖွဈလို့ သတငျးစာမှာ ကွျောငွာရငျ ၁ လကျမ(တဈကျောလံ)ကို ငှကေပျြ ၁၂၀၀၀ (ကပျြ တဈသောငျးနှဈထောငျ)ပဲ ပေးရတယျ။ ဒါကွောငျ့ တနျဖိုးကွီးတဲ့ မွနေဲ့ ကှနျဒိုတိုကျခနျးတှေ ဝယျရငျ ကွေးမုံ ၊ မွနျမာ့အလငျး သတငျးစာမှာ ကွျောငွာဖို့ မမပေ့ါနဲ့လိုက အသိပေးတိုကျတှနျးလိုကျရပါတယျ။
သုခီ အတ်တာနံ ပရိဟရန်တု
ကွန်ဒိုမီနီယံ အိမ်ခြံမြေ အရောင်း ဗဟုသုတ သိမှတ်ဖွယ်ရာ
Mya Sein Yaung Housing (One Land) Selling
Land for Sales @ East Dagon
For Rent Form Hledan